खाना खानेबित्तिकै पेट दुख्छ ? उसोभए तपाईलाई हुनसक्छ अल्सरको संकेत – Annapurna Daily
खाना खानेबित्तिकै पेट दुख्छ ? उसोभए तपाईलाई हुनसक्छ अल्सरको संकेत
On Sep 28, 2021 910
ग्याष्ट्रिक, जसलाई हामी राष्ट्रिय रोग भन्ने गर्छौ। अर्थात अधिकांश नेपालीको साझा रोग हो यो। ग्याष्ट्रिकलाई हामी उस्तो ख्याल गर्दैनौ। हाम्रो खानपान शैली र खानाको प्रकृति ग्याष्ट्रिकको कारण बन्ने गर्छ। जब ग्याष्ट्रिकको निदान खोजिदैन, त्यसले अर्को रोग निम्त्याउँछ। रोग हो, अल्सर। पेट वा सानो आन्द्रामा हुने संक्रमण, घाउ वा प्वाललाई पेटको अल्सर पनि भन्ने गरिन्छ।
चिकित्सकिय भाषामा यसलाई पेप्टिक अल्सर वा गैस्ट्रिक अल्सर पनि भन्ने गरिन्छ। साधारणतया: आहार, तनाव तथा पेटमा अम्लियपना धेरै भएमा पेटको अल्सर हुने गर्छ। अल्सर प्राय: हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक संक्रमणका कारण हुने गर्छ। पेटमा अल्सर भएमा पेट वा आन्द्राको सुरक्षात्मक परक टुट्न थाल्छ। अल्सर बढी भएमा आन्द्रा च्यातिने सम्भावना पनि बढी रहन्छ।
लामो समयसम्म एन्टीबायोटिक्सको प्रयोग, पेनकिलर तथा स्टेराइडको औषधीको सेवन बाहेक मदिराको सेवनका कारण पेप्टिक अल्सर हुने गर्छ। अल्सर भएमा कसैलाई यसको लक्षण छिटै देखा पर्छ भने कसैलाई अल्सर भईसक्दा पनि यसको लक्षण देखा पर्दैन।
कसरी थाहा पाउने ? अल्सर भएमा शरीरमा विभिन्न लक्षण देखा पर्ने गर्छ। अल्सर गम्भीर भइसक्दा पनि समयमै यसको उपचार नभएको खण्डमा यसले आन्तरिक रक्तश्राव गर्नुका साथै अन्य समस्या समेत निम्त्याउन सक्छ।त्यसबाहेक, यी संकेत देखिएमा पनि अल्सर भएको हुनसक्छ।
पेटमा जलन: खाना खाने १ वा २ घण्टा पछि वा रातको सममा पेटको माथिल्लो भाग वा बीचमा लजन महसुस हुन्छ भने यो अल्सरको संकेत हुन सक्छ। वान्ता हुने: बारम्बार बान्ता हुनु वा वाकवाकी लाग्नु पेटको अल्सको संकेत हुनसक्छ। पेट फुल्नु: अक्सर पेट फुल्ने समस्या अल्सरको निशानी हुने गर्छ।